I-Canton Fair okanye i-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China, ngumboniso wezorhwebo obanjwa entwasahlobo nasekwindla unyaka nonyaka ukusukela entwasahlobo ka-1957 eCanton, eGuangdong, China. Yeyona indala, inkulu, kunye neyona ntengiso imeleyo e China.
Siye kwiCanton Fair ukusukela ngo-2006, kabini ngonyaka.
Okuhle ngakumbi siye saya kunxibelelana nathi nje info@ovidaumbrella.com
Izipho zeHk kunye neNkulumbuso yeNkulumbuso
Owona mboniso mkhulu nongowona ubalulekileyo kwezorhwebo kwi-HK rhoqo ngo-Epreli nango-Okthobha. IHongkong izixeko ze-TOP emhlabeni zinxulunyaniswa nokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ishishini kwihlabathi liphela. I-fair inembali ende engaphezulu kweminyaka engama-30. Kukho izipho, iipremiyamu, iimpahla zendlu, ikhitshi kunye nokutya, iimveliso zendlela yokuphila, iithoyi kunye nemidlalo, iKrisimesi kunye nomnyhadala, iimpahla zemidlalo kunye nezinto zokubhala kwingingqi yeAsia-pacific.
Fumana ixesha lethu elifanelekileyo kunye nolwazi info@ovidaumbrella.com
IHomi Milano Fair
IHOMI FAIR ibanjelwe eMilano, e-Itali kabini ngonyaka. Yenziwe nguFiera Milano ngo-1964, onembali engaphezulu kweminyaka engama-50. Ibonwa njenge TOP3 kwelona ziko likhulu lezentengiso eYurophu.
Inendawo yokuhlala, impilo yasekhaya, igadi kunye nangaphandle, amalaphu asekhaya, iziqholo & nokhathalelo lomntu, njl.
I-Korea Fta Izipho zaMazwe ngaMazwe kunye neHome Wellness Home
Korea FTA enobulungisa idume eAsia, njengoko iJapan ne China zisondele kakhulu. Ukuhambisa ngenqanawa ukusuka e-China ukuya eKorea kukhawuleza kakhulu okukhuthaza ishishini phakathi kwe China ne Korea. Lo mtsalane utsala uninzi lweenkampani zokungenisa eKorea, beze nezipho kwaye badle iimpahla, ukuthengisa ishishini.
ASD Umboniso eLasvegas Usa
Isixhobo seMpahla yokuLungiswa kweMpahla kwiKanaada ekwi-Intanethi
I-ATS minyaka yonke ibanjwa eCanada, yayiqhagamshela umthengisi nabathengi be-e-commerce. Kubandakanya isinxibo, ilaphu, kunye nezixhobo. Nokuba kulo nyaka unzima, awungekhe uye kubulungisa, kodwa usenakho ukujonga iimveliso zamva nje kulo mboniso we-Intanethi.
I-China Impahla kunye neZindwangu Expo
I-CHINA IZINXIBO & IZIMPAHLA ZOKUGQIBELA zibanjwa e-Australia minyaka le ukusukela ngo-2001. Lo ngowona mboniso mhle e-Australia okoko eyeka i-TCF ngo-2006. Iquka iimpahla, ikhaya & amalaphu, izipho, iibhegi, izincedisi ezifana neambrela, iziliphu njl. .. unyaka, awungekhe uye kubulungisa, kodwa usenakho ukujonga iimveliso zamva nje kulo mboniso we-Intanethi.